Zoom Help – ဝင်းမေတ္တာ
Zoom တွင် အမည်ပြောင်းပုံ ၊ ယောဂီနံပါတ်ထည့်ပုံ
How to change the name/ add Yogi Number (Zoom တွင်အမည်ပြောင်းပုံ၊ယောဂီနံပါတ်ထည့်ပုံ ) Entering to Zoom Meeting step by step
Zoom Meeting မှာ လက်ထောင်နည်း – How to Raise Hand?
iPhone, iPad, Android Phone Phone screen တနေရာရာပေါ် ထောက်မှ screen ရဲ့အောက်မှာ နှိပ်စရာ ပုံလေးတွေ ပေါ်လာမယ်။ “… More” ကိုထောက်လိုက်ပါ။ “✋ Raise Hand” ကို ထောက်လိုက်ပါ။ Computer/Laptop Also see How to Raise Your Hand inaZoom Meeting – howtogeek.com
Zoom App အသုံးပြုနည်း
Phone တွင် အသုံးပြုနည်း အသံMicrophone နှင့် ရုပ်Video ဖွင့်ပုံ/ပိတ်ပုံ အသံဖွင့်ပုံ/အသံပိတ်ပုံ How to unmute (Microphone အသံဖွင့်ပုံ) How to mute (Microphone အသံပိတ်ပုံ) မိမိ၏ Video ဖွင့်ပုံ/ပိတ်ပုံ How to start video (မိမိ၏ Video ဖွင့်ပုံ) Also see Zoom Meeting မှာ လက်ထောင်နည်း – How to Raise Hand?
Zoom App Download ဆွဲထည့်ရန်
iPhone, iPad Android Phone, Tablet Windows Desktop, Laptop Or Download 64-bit Client | Download ARM Client Macs (MacBook) Or, for Macs with Apple Silicon chips, click here to download Also see Download Center – Zoom